Apple wepụtara Mgbakwunye Mgbakwunye Mgbakwunye maka OS X 10.11.6 maka Okwu Kernel | Esi m mac
Apple wepụtara Mgbakwunye Mgbakwunye Mgbakwunye maka OS X 10.11.6 maka Okwu Kernel
Apple weputara nkwado nche mgbakwunye maka OS X El Capitan, na ụdị tupu macOS Sierra. Mmelite ahụ nwere 623.9MB ma enwere ike ibudata ya site ugbua ma oburu na i tinye Mac App Store ma nweko Mac.
Dị ka anyị na-ekwu na aha nke akụkọ ahụ, ọ bụ mmelite nche mgbakwunye maka OS X 10.11.6 nke ga-edozi nsogbu kernel na ụfọdụ Macs.
Mgbakwunye nchedo nke Apple mere maka ndị ọrụ niile nwere OS X 10.11.6 El Capitan arụnyere, na-abịa na ndozi iji nyere aka dozie nsogbu na-eme na isi nke Macs nke na-eme mgbe ụfọdụ ha azaghị. Ndị ọrụ nwere sistemụ sistemụ arụnyere OS X El Capitan 10.11.6 nwere ike ịchọta mmelite nche 2016-003 na mmelite taabụ nke Mac App Store.
Ndepụta nke mgbanwe nche na-abịa na mmelite kwesịrị ịdị n'oge na-adịghị anya na peeji nke mmelite nchedo Apple. Iji mara ọtụtụ ozi ndị ọzọ gbasara mmelite anyị na-ekwu maka ya, kpọtụrụ akwụkwọ nkwado Apple maka ozi ndị ọzọ dịka ụlọ ọrụ na-atụ aro mgbe niile. Dị ka ị maara, ọ ka mma ichere ụbọchị ole na ole maka ndị mmepe iji nyochaa nkwụsi ike nke mmelite ahụ ka Ọ bụrụ na enwere nsogbu, ahapụla ịhapụ na-enweghị ike iji kọmputa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple wepụtara Mgbakwunye Mgbakwunye Mgbakwunye maka OS X 10.11.6 maka Okwu Kernel
Ahịa nke AirPods adịghị mma dịka echeburu na mbụ